Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Perth waxay iyaguna ku wada ciideen beerta Kings Park
Jaaliyadda Perth waxay iyaguna ku wada ciideen beerta Kings Park
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 19/8/12 ay jaaliiyada S.Ogadeeniya ee magaalada Perth ee Galbeedka Austaraliya ay si heersare ah uga ciideen munaasabada Ciidal Fidriga halkaasoy isugu soo baxeen aroornimadii hore dhaamaan qaybaha kala gadisan ay jaaliyadu ka kooban tahay iyada oo waheliyaan walaalaha kale ee Somaalida iyo dhamaan muslimiinta ku dhaqan magaalada Perth beerta wayn ee caanka ah ee loo yaqaano Kings Park, halkaas oo ay jaaliyadu isugu hambalyaynayeen munaasabada ay ciidu xambaarsan tahay.
Hadaba jaaliyada oo ay horkacayeen masuuliyiinta jaaliyada, hormuudna u ahaa gudoomiyaha jaaliyada halgame Adan C/raxman (Adan dakhare) ayaa waxaad wajiyadooda ka dheehaysay farxad inkastoo dhanka kale ay aad uga xunyihiin tacadiyada aan loo aaba yeelin ee habeen iyo maalin looga soo sheegayo shacabkooda masaakiinta een waxba galabsan ee gumaysiga guunka ah uu dabar jarayo.
Sida waqtiyada ciida soo jireenka u ah jaaliyada S.Ogadenya ee Perth ayaa waxa ay soo diyaariyeen barnaamij cunto karis ah kaas oo loo yaqaan BBQ. Dadka ayagu ku dhaqan wadanka Australia ayaa waxa ay kamidyihiin dawladaha caanka ku ah solidda hilibka noocyadiisa kala duwan loona yaqaan BBQ. Hadaba, markaad indhaha la raacdo madasha ciida ayaad arkaysay qaar katirsan ururka OYSU oo ku mashquulsan samaynta BBQ iyo shacabka oo safaf oogu jira sidii ay u heli lahaayeen hilibkaas asaga ah.
Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Perth ayaa ayadu ah jaaliyad had iyo jeer u taagan garab istaaga halganka lagu xoraynayo Ogaadeeniya ee ay hormuudka u tahay JWXO.
Isku soo wada duuduuboo, madasha ay ku ciidaysay jaaliyadu ayaa ahayd mid aad u bildhaan quruxsa dhamaanna bulshada noocyadeda kala duwan ay kamuuqdeen ayaga oo aad u labis wanaagsanaa.